Sawirro: Axmed Madoobe oo xalay sagootin u sameeyay madaxdii ka qeyb gashay xaflada Caleema saarkiisa. | XAL DOON
Home NEWS Sawirro: Axmed Madoobe oo xalay sagootin u sameeyay madaxdii ka qeyb gashay...
Sawirro: Axmed Madoobe oo xalay sagootin u sameeyay madaxdii ka qeyb gashay xaflada Caleema saarkiisa.
Madaxweynaha dib loo doortay ee maamulka Jubaland Axmed Madoobe, ayaa xalay munaasabad sagootin eheyd u sameeyay madaxdii ka qeyb gashay munaasabada Caleema saarkiisii oo bilowgii Todobaadkan lagu qabtay magaalada Kismaayo.
Xafladda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Puntland, Siciid C/laahi Deni, Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka sare ee Baarlamaanka Somaliya, Abshir Maxamed Axmed (Abshir Bukhaari), Madaxweyne-yaashii hore ee Somaliya, Shariif Shariif Axmed & Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweyne-yaashii hore ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo C/kariin Xuseen Guuleed, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, C/raxmaan C/shakuur Warsame, Xildhibaano Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya ka tirsan iyo marti kale.
Axmed Madoobe oo Khudbad dheer ka jeediyay madasha, ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Khayre, isagoo ku eedeeyay iney ka gaabiyeen waxyaabihii ay u balan qaadeen Shacabka Soomaaliyeed.
Axmed Madoobe waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaato wax kasta oo uu siinayo Dastuurka dalka u yaalo, Loogana baahan yahay madaxda ku sugan Villa Somaliya iney iyaguna qaataan wixii uu Dastuurka siiyo.
Madaxweyne Axmed Madoobe waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ah Shabaab, isagoo tilmaamay in madaxda ugu sareysa wadanka aysan ka go’neyn in la soo afjaro Kooxdan xiriirka la leh urur weynaha Al-Qaacida.
Madaxtooyada Somaliya ayaa diiday in ay aqoonsato doorashada la sheegay in uu ku soo baxay Axmed Madoobe, waxayna taasi bedelkeeda soo jeeday in doorasho ku celis ah la qabto.
Sheekooyinka aan la xusin ee ku xeeran shirka maanta ee Dhuusa-Mareeb.
Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo dhamaan dadaaladii diyaar garowga maalmihii xoriyada siiyay Wasiiro dowladda ah.
Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Oo Xariga Ka Jaray Fagaaraha Midnimada
Askari xabad sigaar ah u dilay qof shacab ah oo dil lagu xukumay.
Askar dhimasho iyo dhaawac ku noqotay qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Madoobe iyo Deni oo sabab u noqday in Dhuusa-Mareeb laga qaado ciidamada Haramcad iyo NISA.